Inona no fomba tsara indrindra hahatongavana amin'ny backlinks DoFollow hatramin'ny taona 2019?
Raha ny momba ny SEO, dia afaka mahita fomba amam-panao marobe mahazatra sy fepetra sasany izay niasa nandritra ny taona maro. Mazava ho azy, ny tontolo maoderina ao amin'ny Search Engine Optimization dia mihamitombo tsy tapaka manandrana manandrana amin'ny fanavaozana tsikelikely sy ny fanavaozana ny algorithm ofisialin'ny Google. Na dia izany aza dia misy ny tricks sy fomba fanao sasany izay nahitana fahombiazana tamin'ny taona lasa - raha ny hevitro dia azo antenaina fa hitazona ny heriny teo aloha, farafaharatsiny amin'ny hoavy mialoha. Ary marina ny anao - misy fomba tena tsara hahazoana ny backlinks DoFollow hatramin'ny 2019. Eto ambany eto dia hampiseho aminao ny rehetra momba ny blaogy fanehoan-kevitra tahaka ny pro pro mba hahazo ireo backlinks mendrika miaraka amin'ny DoFollow ho valin'izany. Ka andeha aloha.
Ity fitaovana fanorenana fifandraisana malaza ity dia andrasana ho ilaina amin'ny fanorenana backlinks DoFollow amin'ny 2019, toy ny ankehitriny. Ity no tokony ho fantatrao hampiasa ity fomba mahatalanjona ity hanorenana rohy.
Dingana 1: Fifehezana ny fototra iorenana
Voalohany indrindra, manasa ahy ny manomboka amin'ny teny fototra sy ny fehezanteny fototra. Tadidio - ny fisafidianana ny teny fiteninao dia zavatra manan-danja izay mahatonga ny votoatinao ho hita amin'ny fikarohana an-tserasera. Eny, manoratra ny votoatiny lehibe amin'ny lalam-panorenana avo lenta avo indrindra. Saingy tsy misy dikany ny zava-drehetra raha tsy ny tena mpampiasa no mikaroka anao amin'ny fanontaniana lehibe manan-danja indrindra.
Dingana 2: Fampiasana lahatsoratra manokana momba ny blôgy mba haka rohy
Raha vantany vao azonao ny teny fanalahidy tianao hanombohana dia tokony handefa blaogy manokana momba ny loha-hevitrao aho tsena. Amin'izany fomba izany, manoro hevitra aho hampiasa ny CommentLuv plugin, blaogera iray tena tsara fanamarihana ny rafitra fantatra amin'ny SEOs sy ny webmaster. Ary mino aho fa ity fomba mahatalanjona ity dia mbola manan-danja amin'ny fananganana backlinks DoFollow na amin'ny 2019. Miasa amin'ny ankapobeny ny zava-drehetra, noho izany dia tsy maintsy manana fahasarotana miaraka amin'ity mpanampy ity ianao.
Etiopia 3: Mitazona fanamarihana Genuine
Ary eto dia miditra ao anaty fifindrana tanteraka. Midika izany fa tokony ampitandremana ianao - ny zavatra dia azon'ireo mpitoraka blaogy mora foana fa ny fanehoan-kevitra kely fotsiny no manamarina fa misy ireo backlinks mendrika amin'ny DoFollow. Izany no mahatonga ny lionan'ny anjaran'ireo fanehoan-kevitra vao haingana izay mety ho nopotehina tamin'ny fohy. Mba hisorohana ny fitrangan-javatra mampalahelo tahaka izao dia manoro hevitra ny mitazona ny fanehoan-kevitra rehetra ataonao aho. Midika eto aho fa tokony hanamarina foana ny fanamarihana bilaogy tsirairay alohan'ny hiaingana. Mitandrema fotsiny hoe mandany fotoana bebe kokoa mba hananana ny zava-drehetra - mamaky lahatsoratra amin'ny fomba lava, ary mametraka fanehoan-kevitra fotsiny izay tsy vitan'ny hoe manana hevitra tonga lafatra fa afaka manome ny lanjany tena ho an'ny mpamaky.
Manao izany, aza oviana na oviana amin'ny fanalana baiko maro fanehoan-kevitra amin'ny blôgy ho an'ny backlinks, raha tsy te-hananganana sainam-borona amin'ny motera Google Google ianao. Aza avela hijangajanga amin'ny asa aman-draharaha tsy misy na inona na inona. Farany, aza adinoina fa misy fomba maro hafa toy ny famoahana ny lisitry ny lahatsoratra na ny famerenana backlinks amin'ny forum. Ireo fomba tsara tena ilaina amin'ny fananganana rohy ireo dia mety ho andrasana amin'ny fitazonana ny fahombiazan'izy ireo amin'ny famoronana asa goavana atao DoFollow hatramin'ny 2019 Source .